Madaxweyne Gaas oo ka warbixiyay duqeyntii lagu bartilmaameedsaday Horjoogaha Daacish ee Soomaaliya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Gaas oo ka warbixiyay duqeyntii lagu bartilmaameedsaday Horjoogaha Daacish ee Soomaaliya
Madaxweyne Gaas oo ka warbixiyay duqeyntii lagu bartilmaameedsaday Horjoogaha Daacish ee Soomaaliya
MUQDISHO- (SONNA)- Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa markii ugu horeysay ka hadlay duqeyn diyaaradeed oo lagu beegsaday horjoogihii Daacish ee Soomaaliya oo ku sugan Buuralayda Galgala ee Puntland.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in horjoogaha kooxda Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin inuu ka badbaaday weerarkii ay Jimcihii Maraykanku ku qaadeen buuralayda Gobolka Bari taasi oo isaga lagu bartilmaameedsanayay.
Xogo ay heleen hay’adaha ammaanka Puntland ayuu ku sheegay Madaxweynaha Puntland in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday Cabdulqaadir Muumin,iyo maleeshiyaad uu hoggaamiyo kuwaasi oo ku dhuumaalaysanaya Buuralayda Gobolka Bari.
C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa soo dhaweeyay beegsiga lagu hayo kooxda Daacish, isaga oo sidoo kale tilmaamay Daacish in ay yihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed,loona baahanyahay in la iska kaashado dagaalka lagula jiro argagixisada.
Previous articleSoomaalida Mareykanka”Waan ka qeybgalaynaa dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab
Next articleDonald Trump oo ka hadlay weerarkii lagu dilay 26 qof